आजदेखि डिभी खुल्दै, कस्तो छ नियम ? आवदेन भर्ने तरिका जान्नुस् – Everest Dainik – News from Nepal
आजदेखि डिभी खुल्दै, कस्तो छ नियम ? आवदेन भर्ने तरिका जान्नुस्
काठमाडौं, असोज १७ । आजदेखि अमेरिकी इलेक्ट्रोनिक्स डाइभर्सिटी भिसा (डीभी) को आवेदन खुल्ने भएको छ । आवदेन आज राती ९ः४५ बजेदेखि खुल्ने भएको हो । डीभीको आवेदन कात्तिक २० गते राति १०ः४५ बजेसम्म खुला रहनेछ ।
सन् २०२० को लागि डीभीको आवेदन दिन सकिने काठमाडौंस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ । डीभी भर्न चाहनेले तोकिएको समयभित्र http://www.dvlottery.state.gov वेब साइटमा गएर डीभीका लागि आदेवन भर्न सक्नेछन् ।
ट्याग्स: DV 2019